ချစ်သူများနေ့မှာ တစ်ယောက်ထဲ အ ထီး ကျန်နေတဲ့သူတွေနား ထော င် ဖို့ရိုက်ကူးပေးခဲ့တဲ့ ရွှေထူးရဲ့ သီချင်းလေး” – XB Media Myanmar
ချစ်သူများနေ့မှာ တစ်ယောက်ထဲ အ ထီး ကျန်နေတဲ့သူတွေနား ထော င် ဖို့ရိုက်ကူးပေးခဲ့တဲ့ ရွှေထူးရဲ့ သီချင်းလေး”
သီချင်းကောင်းတွေများစွာကို ရေးစပ်သီဆိုခဲ့တဲ့ရွှေထူးကတော့ ဂီတခရီးလမ်းကိုစတင် လျှော က်လှမ်းခဲ့စဉ်ကတည်းက လူငယ်ပရိသတ်တွေအကြိုက်တွေ့ စေတဲ့သီချင်း ပေါင်း များစွာကို သီဆိုခဲ့တာယနေ့အချိန်ထိလို့ပဲလို့ ဆိုရမှာပါ။အိမ်ထောင်ကျပြီးနောက်ပိုင်းမှာ မိန်းမဖြစ်သူရဲ့ ဂရုစိုက်မှုကိုများစွာရရှိနေတာကြောင့် အလွမ်းအဆွေးသီချင်းတွေ သိပ်မဆို ဖြစ်တော့ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါပေမယ့်အလွမ်းအဆွေးသီချင်းတွေနဲ့နာမည်ရလာတဲ့ရွှေထူးကတော့ မနက်ဖြန်ချစ်သူ များနေ့မှာဆွေးနေရမယ့် တစ်ကိုယ်တည်းသမားတွေအတွက် သူ့ရဲ့သီချင်းအဟောင်းလေး ကို Music Video ပြန်လည်ရိုက်ကူးပြီး အမှီတင်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခုတင်ပေးထားတဲ့ Unlucky Day သီချင်းလေးကတော့ စတင်ထွက်ရှိခဲ့စဉ်ကတည်းက ပရိသတ်တွေအကြိုက် တွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပြီး နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းချစ်သူများနေ့နီးလာတဲ့အချိန်ရောက်ရင် လူငယ်တွေပါးစပ် ဖျားမှာ ရေပန်းစားနေကြပါ။ဒီနှစ်မှာတော့ ရွှေထူးက သီချင်းဗွီဒီယိုလေးကို အချိန်မ ရှိတဲ့ကြားကရိုက်ကူးပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီး “Valentine’s Day မှာ Unlucky Day မဖြစ်ကြပါ စေနဲ့လို့ အားလုံးကိုဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာ” ဆိုပြီး မျှဝေပေးခဲ့တာပါ။
ဒါ့အပြင် “လိုအပ်ချက်တွေရှိရင်လည်း နားလည်ပေးကြပါခင်ဗျာ.. Shooting တစ်ဖက်နဲ့ အချိန်သိပ်မရလို့ ရာသီစာလေးကျွေးချင်လို့ အမြန်လုပ်လိုက်ရတာ အားလုံးကို အားနာပါတ ယ်ခင်ဗျာ” ဆိုပြီးဗွီဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ် ။ရွှေထူးမအားတဲ့ ကြားထဲက FA တွေအတွက်အမှီရိုက်ကူးပေးခဲ့တဲ့ Unlucky Day ဗွီဒီယိုလေးကို ပရိသတ် ကြီးအတွက် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
Source – Shwe Htoo,CRD-Cele Gabar
သီခ်င္းေကာင္းေတြမ်ားစြာကို ေရးစပ္သီဆိုခဲ့တဲ့ေရႊထူးကေတာ့ ဂီတခရီးလမ္းကိုစတင္ ေလၽွာ က္လွမ္းခဲ့စဥ္ကတည္းက လူငယ္ပရိသတ္ေတြအႀကိဳက္ေတြ႕ ေစတဲ့သီခ်င္း ေပါင္း မ်ားစြာကို သီဆိုခဲ့တာယေန႔အခ်ိန္ထိလို႔ပဲလို႔ ဆိုရမွာပါ။အိမ္ေထာင္က်ၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာ မိန္းမျဖစ္သူရဲ့ ဂ႐ုစိုက္မွုကိုမ်ားစြာရရွိေနတာေၾကာင့္ အလြမ္းအေဆြးသီခ်င္းေတြ သိပ္မဆို ျဖစ္ေတာ့ဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။
ဒါေပမယ့္အလြမ္းအေဆြးသီခ်င္းေတြနဲ႔နာမည္ရလာတဲ့ေရႊထူးကေတာ့ မနက္ျဖန္ခ်စ္သူ မ်ားေ န႔မွာေဆြးေနရမယ့္ တစ္ကိုယ္တည္းသမားေတြအတြက္ သူ႔ရဲ့သီခ်င္းအေဟာင္းေလး ကို Music Video ျပန္လည္ရိုက္ကူးၿပီး အမွီတင္ေပးခဲ့ပါတယ္။အခုတင္ေပးထားတဲ့ Unlucky Day သီခ်င္းေလးကေတာ့ စတင္ထြက္ရွိခဲ့စဥ္ကတည္းက ပရိသတ္ေတြအႀကိဳက္ ေတြ႕ခဲ့တာျ ဖစ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္းခ်စ္သူမ်ားေန႔နီးလာတဲ့အခ်ိန္ေရာက္ရင္ လူငယ္ေတြပါးစပ္ ဖ်ားမွာ ေရပန္း စားေနၾကပါ။ဒီႏွစ္မွာေတာ့ ေရႊထူးက သီခ်င္းဗြီဒီယိုေလးကို အခ်ိန္မ ရွိတဲ့ၾကားက ရိုက္ ကူးေပးခဲ့တာျဖစ္ၿပီး “Valentine’s Day မွာ Unlucky Day မျဖစ္ၾကပါ ေစနဲ႔လို႔ အားလုံးကို ဆုေတာင္းေပးပါတယ္ခင္ဗ်ာ” ဆိုၿပီး မၽွေဝေပးခဲ့တာပါ။
ဒါ့အျပင္ “လိုအပ္ခ်က္ေတြရွိရင္လည္း နားလည္ေပးၾကပါခင္ဗ်ာ.. Shooting တစ္ဖက္နဲ႔ အခ်ိ န္သိပ္မရလို႔ ရာသီစာေလးေကၽြးခ်င္လို႔ အျမန္လုပ္လိုက္ရတာ အားလုံးကို အားနာပါတ ယ္ခင္ ဗ်ာ” ဆိုၿပီးဗြီဒီယိုေလးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေျပာၾကားခဲ့ပါေသးတယ္ ။ေရႊထူးမအားတဲ့ ၾကားထဲက FA ေတြအတြက္အမွီရိုက္ကူးေပးခဲ့တဲ့ Unlucky Day ဗြီဒီယိုေလးကို ပရိသတ္ ႀကီးအတြက္ မၽွေ ဝေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။
ယောကျ်ားလေးတစ်ယောက်အလား မန်ကျည်းပင်ပေါ်ကလွှားခနဲခုန်ချခဲ့တဲ့ ဖြူဖြူထွေးရဲ့ဗွီဒီယိုဖိုင်လေး
နာမည်ကြီးမင်းသား(၂)ဦးနဲ့အတူ အကြမ်းစားတွေရိုက်ကူးသွားမယ်ဆိုတဲ့ ယုန်လေး